စိတ်ကြိုက်မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းစက် Parameters စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Changsen Electronic Technology Co. , Ltd.
ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
Charger ပါဝါ Circuit Board
5V အားသွင်း PCBA
အဆိုပါ adapter PCBA
pcba ဦး ဆောင်လမ်းပြ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Charger ပါဝါ Circuit Board > မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်း Parameters
ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ် Parameters
Car Charger Parameters
charger power supply ထုတ်ကုန်များ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသုံးချမှုများ - ၁) အင်ဂျင်နီယာသည် power supply series ၏တည်ငြိမ်သောဒီဇိုင်းကိုလက်ခံသည်။ circuit ၏ output voltage သတ်မှတ်ချက်သည် voltage ၏မတည်ငြိမ်မှုကိုထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကိုမထိခိုက်စေရန်တားဆီးသည်။ durability သည် circuit board သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအမှတ်တံဆိပ် supply အစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၇၂၀ နာရီကြာအောင်အနှောင့်အယှက်မရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။ circuit board တွင်အလိုအလျောက် fuse box၊ high-voltage သို့မဟုတ် short-circuit automatic protection များတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြီးတွင် circuit board ကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်တပ်ဆင်ထားရမည်။ ၃) charger ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများကဲ့သို့သောအီလက်ထရောနစ်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်။
၁။ လက်ကိုင်ဖုန်းအားသွင်းစက် \_ t
5V1A mobile phone charger input ကိုဗို့ 220V output voltage 5V direct chargeCharging current 1000mA
ခဲ - အခမဲ့ဖြစ်စဉ်ကို
ခဲ - အခမဲ့
၂ charger power supply ထုတ်ကုန်များ၏ applications များ:
၁) အင်ဂျင်နီယာသည် power supply စီးရီး၏တည်ငြိမ်သောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ circuit ၏ output voltage parameter သည် voltage အားကုန်ထုတ်ခြင်းကိုထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းသို့မကျရောက်စေရန်တားဆီးရန်အဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်သည်။
၂။ ၎င်း၏သက်တမ်းကိုစဉ်းစားခြင်း၊ တိုက်နယ်ဘုတ်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ယူရမည် ၇၂၀ နာရီအိုမင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်မရှိမရှိစစ်ဆေးပြီး၎င်းကိုအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ ကြာရှည်ခံမှု။ circuit board တွင်အလိုအလျောက် fuse box တပ်ဆင်ထားရမည်။ high-voltage သို့မဟုတ် short-circuit automatic protection နှင့်အလိုအလျောက် restore လုပ်ခြင်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပြီးနောက် circuit board ။
၃။ charger ကိုအသုံးပြုသည် လက်ကိုင်ဖုန်းများကဲ့သို့အီလက်ထရောနစ်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များ။
CHANGSEN CO ။ , Ltd
ood ထုတ်ကုန်ပိုကောင်း ဝန်ဆောင်မှု
input ကို plug
ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း (တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဥရောပစသည်)
output ကို plug ကို
IC function ကိုအစီအစဉ် လုံလောက်သောပါဝါနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာ
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး function ကို
လက်ရှိ၊ overload၊ overvoltage နှင့် short circuit protection တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်
တ ဦး တည်းအမိန့်များနှင့် supportproofing
ပေးပို့ခြင်းကို 25 ရက်အတွင်း
4. အရည်အသွေး အကဲဖြတ်
1ï¼‰ charger သည်အမျိုးသားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ 3C, CQC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်
2ï¼ our ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီအတွက်အထူးစမ်းသပ်ကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပါမည်။ တိုင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွေ့အကြုံစမ်းသပ်သည်။ ကျပန်းစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးသည့်ပစ္စည်း၏ဤသည်မှာ -
တိုက်နယ်ဘုတ်ကို acustom လုပ်သောပုံး၊ တိုက်မိခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ PE အိတ်အစိုဓာတ်ထိန်းပစ္စည်းများအတွက်ထုပ်ပိုးထားသည်။
၂။ အားသွင်းရန် ၇- ရက်အတွင်းနမူနာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်မည်။
3ï¼‰စျေးနှုန်းများ ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်၏အရေအတွက်အရသိရသည် laddered နေကြသည်။
သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်သင့်အားဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားကိုမဆိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်သောင်းချီသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည့်အီလက်ထရွန်နစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုသည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများဖြစ်ပြီးသင့်အားတည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ သို့သော်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဤနေရာတွင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိပုံများသည်ဖောက်သည်များထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မှာယူခဲ့သည့်နမူနာများဖြစ်သည်။
1ï¼‰ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း - ကြိုတင်ပေးငွေ ၃၀%၊ တင်ပို့ပြီးနောက်ပေးချေမှု။
3ï¼‰ ထုတ်ကုန်ကိုသင်မသိပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ နမူနာပြရန်အရောင်းပြခန်းသို့သွားပါ။ အတည်ပြုခြင်းနှင့်မှာယူပါ။ အရည်အသွေးသည်အော်ဒါမှာရန်ဖြစ်သည်၊ ထုတ်ကုန်နှင့်နမူနာအကြားခြားနားချက်သည်ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်နှင့်လဲလှယ်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အရည်အသွေးကိုနမူနာအပေါ်အခြေခံသည်!
ကြိုတင်ရောင်းချမှုအစည်းအဝေးသည်ဖောက်သည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ၊ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်၊ တယ်လီဖုန်းအမိန့်များနှင့်စာပို့စနစ်များကိုလက်ခံလိမ့်မည်။
ဖောက်သည်များကိုအရောင်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအချိုးအစားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက် ပေး၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းတို့ကိုတက်ကြွစွာခြေရာခံပါ။
ရောင်းချပြီးနောက် - 1. Ifit သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်၏အရည်အသွေးပြproblemနာဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်ကိုသဘောတူညီထားသောကာလအတွင်းအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ 2. အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းသည်လူ့အကြောင်းအချက်များကြောင့်သာမန်အားဖြင့်အသုံးမပြုနိုင်ပါကပြtheနာ၏အကြောင်းရင်းကိုဖောက်သည်အားရှင်းပြပြီးထိုကဲ့သို့သောပြroနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံချက်ဖြင့်အကျုံးမ ၀ င်ကြောင်း ၀ ယ်သူ၏ပြproblemနာနှင့်အညီအခြားသုံးစွဲသူများအားဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
Hot Tags: မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းစက်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
လိပ်စာ: အခန်း ၃၀၂၊ ၃ / F၊ ၃၅ Xisha လမ်း၊ Shijie မြို့၊ Dongguan City
မည်သည့်မေးခွန်းများအတွက်မဆိုသင်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုင်ပင်နိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကသင့်ကိုကျေနပ်စေမည်
ဘလူးတုသ်နားကြပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်မျှသိသနည်း2020/10/16
Bluetooth နားကြပ်သည်သုံးစွဲသူများအားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောဝါယာကြိုးများထဲမှမတွန့်ဆုတ်ဘဲလွယ်ကူစွာစကားပြောနိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောလက် - နားကြပ်ကိုအသုံးပြုထားသော Bluetooth နည်းပညာဖြစ်သည်။ ဘလူးတုသ်နားကြပ်များသည်မိုဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစတင်ပေါ်ပေါက်လာကတည်းကအလွန်ကောင်းသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။
နားကြပ်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အချက် ၅ ချက်။2020/10/16
ပထမ ဦး စွာလိုက်ဖက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
@Copyright 2020-2021 CHANGSEN CO ။ , Ltd